मंसिर २२ गते विवाह गर्दै श्वेता खड्का, को हुन् दुलाहा ? – Daunne News
काँग्रेस कालिका नगर समितिले भिमोदय चोकमा बिरोध सभा गर्ने
भुकम्प दिवसमा कावासोतीमा प्रभातफेरि – भिडियो सहित
कावासोतीका पञ्जीकरण कर्मचारीलाई केन्द्रीय विभागको अभिमुखिकरण
हसौरामा फुटवल प्रतियोगिता शुरुः उद्घाटन खेल आयोजक रातोले जित्यो
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै
संचारकर्मी बिना श्रेष्ठको निर्देशनमा शान्ति श्री परियारको ‘न्याय मरेको देश’ सार्वजनिक
किसानहरुलाई कृषि उपकरण सहयोग
मंसिर २२ गते विवाह गर्दै श्वेता खड्का, को हुन् दुलाहा ?
By Daunne News	 Last updated Dec 5, 2020
काठमाडाैं, १८ मंसिर । नेपाल चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री श्वेता खड्का विवाह बन्धनमा बाधिँने भएकी छिन् । मंसिर २२ गते धनगढीका विजयन्द्र सिहं रावतसँग उनले लगनगाँठो कस्न लागेकी हुन् । उनीहरू दुबै केही समयदेखि प्रेममा थिए । उनीहरूकाे निमन्त्रणा पत्र समेत सार्वजनिक भइसकेकाे छ । विवाह कार्डमा लेखिए अनुसार उनको विवाह गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा हुने छ [
विवाहमा दुई परिवार निकट सदस्यकोमात्र उपस्थिति हुने बताइएकाे छ । दसैँ तिहारको बीचमा उनको विवाह हुनेबारे धेरै नै चर्चा चलेको थियो । तर श्वेताले भने आफ्नो तत्कालै विवाह गर्ने योजना नरहेको बताउँदै आएकी थिइन् ।
नायिका स्वेता खड्का चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’बाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । श्वेताले नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग वि.सं २०७१ साल असार २३ गते विवाह गरेकी थिइन् । तर, बिहे भएको करिब एक महिनापछि श्रीकृष्णको वि.सं २०७१ साल साउन २५ गते भारतमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो
म्युजिक भिडियोमा कलाकार चेतबहादुर “राजा”
अंशिका बनिन ‘मिस नेपाल युनिभर्स’
पल शाहको ‘पारै मिलेन’ – भिडियो
माघ ३, ०८:१५
जनगणतन्त्र ल्याउन क्रान्तिकारी कम्युनिष्टसंग मोर्चाबन्दी…
माघ २, २१:४२
माघ २, २०:५९
माघ २, १८:०४
हसौरामा फुटवल प्रतियोगिता शुरुः उद्घाटन खेल आयोजक रातोले…
माघ २, १७:४३
माघ २, १७:३८
माघ २, १७:११
माघ २, १०:१४